उपत्यका समाचार – Page9– MeroJilla.com
जीवित भएको प्रमाण लिन र गरिब भएको प्रमाण लिन पनि कर Thursday, August 16th, 2018
काठमाडौं- बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किएमा नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पूर्व) र (पश्चिम)का स्थानीय तहहरूले कुनै व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाणित गर्न कर उठाउन थालेका छन् । रुकुम (पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिकाले यसबापत पाँच सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । रुकुम (पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिकाले उक्त शीर्षकमा दुई सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । दुवै जिल्लाका सबै..
कहिले होला बादल र विप्लवको भेट (पुराना ११ तस्बिरसहित) Wednesday, August 15th, 2018
काठमाडौं । रामबहादुर थापा अर्थात् बादल । पूर्वरक्षामन्त्री, अहिलेका शालीन र कुशल गृहमन्त्री । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता थापा यसअघि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रमा विद्रोह गरी वरिष्ठ नेता मोहन वैद्य किरणको सहयात्री बने । त्यहीँ थिए युवानेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लव अर्थात् अहिलेका अर्का विद्रोही कमाण्डर नेता । मोहन वैद्यसँग लामो समय सहकार्य हुने नदेदेपछि..
महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान सदस्यमा मनोनित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको सदस्यमा मनोनित भएकी छन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले राणालाई ३ वर्षका लागि प्रतिष्ठान सदस्यमा मनोनित गरेको हो । प्रतिष्ठानको सदस्यमा महासंघ अध्यक्ष राणासहित पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा, पूर्वसांसद लालबाबु यादव, डिल्लीराज घिमिरे, डा. खड्क केसी, प्रा.डा. मीना वैद्य मल्ल,..
बर्खास्त नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी
काठमाडौं- सरकारले नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको छ । हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । व्यवस्थापकीय काम गर्न नसकेको र संस्था निरन्तर ओरालो लागेको भन्दै सरकारले राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको हो । यसअघि सरकारले उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । राजभण्डारी ०७३ साल असोज ६ गते तीन वर्षका..
बिप्लब नेतृत्वको नेकपाले गरेको बन्दको प्रभाब देशैभर Tuesday, August 14th, 2018
काठमाडौं- नेत्रविक्रम चन्द ‘बिप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वन्द आव्हान गरेपछि त्यसको प्रभाव आंशिक परेको छ । आज विहानै देशका विभीन्न स्थानमा बम तथा शंकास्पद बस्तु फेला परेका छन् । बम तथा शंकास्पद बस्तु फेला परेपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न आठ स्थानमा बम तथा शंकास्पद बस्तु फेला परेको नेपाल प्रहरी जनाएको छ । फेला..
सार्वजनिक गर्‍यो ओली सरकारले ५ महिने उपलब्धी Monday, August 13th, 2018
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सोमबार आफ्नो ५ महिने उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आफ्नो उपलब्धीको रुपमा सिण्डिकेटको अन्त्य, सुन तस्करमाथि कारबाही, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती अन्त्य, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण लगायतका विषयलाई उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरेको छ । डुवान समस्याको दीर्घकालीन समाधान, जलमार्गको..
‘जुलियन असान्जलाई संकटबाट मुक्त गर’
धनन्जय बुढा काठमाडौं । अष्टे«यलिन नागरिक जुलियन असान्जलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न सबै तहबाट प्रयास हुनेपर्नेमा जोड दिएका छन् । अमेरिकाले ईराक, अफगानिस्तानमा युद्ध गरेर निर्दोष नागरिक र पत्रकारहरुको निमर्मतापूर्वक हत्या गर्ने र त्यसको सूचनाबाट विश्व समूदायलाई अलग राख्ने गोप्य सूचना चुहावट गर्ने विकी लिक्सका संस्थापक समेत हुन् । सूचना चुहावट गरेको आरोपमा अमेरिकाले..
वर्तमान सरकारका ५ महिनाः सुशासनका लागि मानक थालनी
–रमेश लम्साल काठमाडौँ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारको अन्त्य, विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने लगायत १३ प्राथमिकताका क्षेत्रमा ‘सुशासनका लागि मानक थालनी’ गरेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पादन भएका कामको बारेमा प्रकाशित ‘वर्तमान सरकारका ५ महिना’ नामक पुस्तकमा तस्करमाथि कारवाही र प्रभावकारी नियन्त्रण, औचित्यहीन भ्रमणमा नियन्त्रण, सार्वजनिक खरीदमा..
अवकाश उमेर ६० पुर्याउन कर्मचारीको चलखेल Sunday, August 12th, 2018
काठमाडौं । बहालवाला सहसचिव र सचिवहरुको स्वार्थअनुरुप निजामती कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर हद ६० पुर्याउने चलखेल तीव्ररुपमा अगाडि बढेको छ । निजामती कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै अएको सन्दर्भमा तिनै कर्मचारीको स्वार्थअनुरुप संघीय निजामती सेवा ऐनमा अवकाश पाउने उमेर ६० बर्ष प्रस्तावित गरिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ । ऐनको धारा ५० मा ६०..
देशभरका १०१ किसान संघसंस्थाहरु एकै ठाउँमा, किसानको हितमा साझा आन्दोलन गर्ने Saturday, August 11th, 2018
काठमाडौं– कृषि उपजले मुल्य नपाएपछि बिभिन्न उत्पादनमा सम्लग्न किसानहरुले देशभर आन्दोलनको तयारी गर्दै एक ठाउँमा जुटेका छन् । तरकारी, फलफुल, दुध, केरा, च्याउ उत्पादन लगायतका १०१ कृषि संघ संस्थाहरुको मंगलबार राजधानीमा बसेको बैठकले साझा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त कृषि संघ संस्थामा करिव ५० हजार किसानहरु आवद्ध रहेका छन् । बिभिन्न जिल्लाका कृषि सहकारी, समुह, प्रविधि..
जन्मँदा बाबुको पहिचान नचाहिने,नागरिकता लिदा अनिवार्य Friday, August 10th, 2018
काठमाडौँ । सरकारले मङ्गलवार र बुधवार संसद्मा दर्ता गरेका दुइओटा विधेयक एक आपसमा बाझिएका छन् । संविधानको मौलिक हक कार्यन्वयन गर्न बनाइएको प्रजनन स्वास्थ्य विधेयक र संविधानको भाग २ मा रहेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न ल्याइएको एन संशोधन विधेयक एक–अर्कासँग बाझिएका हुन । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधवार संसदामा दर्ता गरेको..